Allgedo.com » 2011 » September » 06
Home » Archive Daily September 6th, 2011 Xarakada Al Shabaab oo soo saartay Warmurtiyeed ku socda Bahda Waxbarashada Koonfurta Somaliya. Sep 6, 2011 Xarakada Al-shabaab oo maamusha inta badan gobolada dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay maanta soo saartay waraxaafadeed ka hadlaya Waxbarashada ka jirta dalka Soomaaliya.
Inkastoo Somaliya aysan muddo sanada ah laheyn dowlad shaqeysa hadane waxaa jiray hay’ado carabta iyo wadamada reer galbeedka laga leeyahay oo arrimaha waxbarashada ka shaqeynayay kuwaasi oo si KMG ah u buuxiyay booskii... City wants residents of North Side apartment complex to meet on conflicts Sep 6, 2011 Columbus, Ohio (AOL) – A clash last month between black and Bhutanese Nepali residents of a North Side apartment complex started when two men tried to rob one of the refugees, witnesses said.
Now, the city of Columbus is trying to set up a meeting between the Bhutanese Nepali community and other residents to try to discuss cultural differences and other simmering issues.
Abdi Soofe of the city’s... Jaaliyada Share Homeland ayaa markii sadexaad gaarsiisay deeq lacgeed barkacyaasha Muqdisho Sep 6, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Deeq lacageed ay iska soo uruuriyeen jaaliyada Share Homeland ee Sweden islamarkaana ay usoo wakiisheen Kamal Xasan Calasow ayaa loo qebiyay in ka badan 250 qoys oo ku soo barakacay gobolka Banaadir.
Deeqdani lacageed oo gaareysay illa iyo $1,133 Dollar, islamarkaana ay iska soo uruuriyeen jaaliyada Share Homeland ee Sweden ayaa waxaa lagu qaybiyay cusbitaalka Banaadir,... HIRDA oo iskuul Waxbarasho oo ku yaala Magaalada Laascaanood ka hirgelisay biyo gelin (Sawiro) Sep 6, 2011 Laascaanood, Somalia (AOL) – Ururka HIRDA ayaa gudaha Magaalada Laascaanood waxaa uu ku soo gabagabeeyey Howl Mashruuc balaaran oo dhismayayaal cusub loogu kordhinayey mid ka mid ah iskuul ku yaala Magaalada Laascaanood, Iskuulkaasi oo lagu Magacaabo Saamalay Primary and Secondary School oo ay hadda wax ka bartaan arday badan oo isugu jira Wiilal iyo Gabdho.
Abdisalam Maxamed Xuseen oo ah... Shirkii Wadatashiga Soomaaliya oo la soo gabagabeeyey (Warbixin Dheer) Sep 6, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Shirkii wadatashiga Soomaalida ee muddada saddexda maalmood ka socday magaalada Muqdisho ayaa galabta lasoo gabagageeyay iyadoo qodobadii shirka kasoo baxay ay wada saxiixeen dhammaan ka qeyb galayaashii shirka.
Shirkaa oo ay soo qabanqaabisay Qaramada Midoobay, isla markaana ay ka qeyb galeen dowladda KMG Soomaaliya, maamulada dalka, urur gobolleedka IGAD, ergo ka... Allgedo waxay dooneysaa Wariye qibrad leh oo Muqdisho ka howl-gala (Akhri shuruudaha laga rabo wariyaha) Sep 6, 2011 Maamulka Allgedo waxuu doonayaa wariye qibrad fiican u leh shaqada Wariye-nimada, shuruudaha laga rabo wariyaha aan raadineyno waa sida soo socota:
1. Waa in uu degan yahay kana howl gali karo Muqdisho.
2. Waa in uu yahay qof daacad iyo howl kar ah.
3. Waa in uu yahay wariye ku xeel dheer shaqada wariye-nimada, horayna ula soo shaqeeyay Radio’s, TV’s, Websites ama Journals.
4. Waa in... C/qaasim “Shirka lagu sheegay Wadatashiga ee ka socda Muqdisho laguma tilmaami karo Wadatashi…”. Sep 6, 2011 Madaxweynahii hore ee Soomaaliya Dr. C/qaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in shirka wadatashiga Soomaalida ee ka socda magaalada Muqdisho aan loo dhammayn.
Waxa uu sheegay in shirka ay ka maqan yihiin waxgaradka, odayaasha dhaqanka, culumaa’udiinka iyo qaar ka mid ah maamul gobolleedyada, wuxuuna sheegay inaan lagu tilmaami Karin shir wadatashi ah.
“Shirka lagu sheegay wadatashiga ee ka socda magaalada... Dagaal faraha looga gubtay oo xalay ruxay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Sep 6, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Habeenkii xalay xilligii saqda dhexe ayaa waxaa qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada dowladda KMG oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo xarakada Al-shabaab.
Dagaalka oo ka dhacay waddada Warshadaha iyo Ex-Koontarool Afgooye ayaa waxa uu yimid kadib markii ay xoogag Al-shabaab ka tirsan ay weerar ku qaadeen fariisimo ay halkaasi ku... Shirkadda SKA iyo Shir kale oo maalinta barito ah hortagaya Maxkamada Sare ee dowladda KMG ah. Sep 6, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Maxkamadda sare ee dowladda KMG Soomaaliya ayaa amar ku siisay shirkadaha SKA Air iyo Somali Airport Logistic ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho in ay horyimaadaan maxkamadda horteeda.
Labadaas shirkadood oo la faray in beri oo Arbaco ah ay Maxkamadda horyimaadaan ayaa waxa uu sheegay Guddoomiyaha maxkamadda Caydiid C/llaahi Ilko-xanaf in wax laga weydiin doono... Ma dhabaa in C/raxmaan Faroole ka carooday shirka Wadatashiga Soomaaliya (Warbixin Xasaasi ah). Sep 6, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Waxaa shalay si kedis ah uga dhoofay Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland C/raxmaan Faroole.
Wararku waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole uu ka carooday shirka wadatashiga Soomaalida ee Muqdisho ka socda, inkastoo isagu uusan sheegin sababta keentay inuu shirka oo aan dhammaan... BoggaXiga »